किन पुरुष यस्ता युवतीसँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् ? – हिमाल न्युज
किन पुरुष यस्ता युवतीसँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् ?
कस्ता युवतीसँग पुरुषहरु आकषिर्त हुन्छन् ? यसमा आ-आफ्नै राय हुनसक्छ । यद्यपी बढ्दो उमेरका पुरुषलाई भने आफुभन्दा निकै कम उमेरका युवती मनपर्ने रहेछ । यो हाम्रो अनुमान होइन । रिसर्चले निकालेको निष्कर्ष हो ।
पुरुषहरु आफु जतिसुकै उमेर पार गरेपनि आफ्नालागि उनीहरुले जवान युवती रोज्ने गरेका छन् । उमेर पाको हुँदै गएपनि पुरुषको झुवाक आफुभन्दा निकै कम उमेरका युवतीमा हुने उक्त अध्ययनमा खुलेको छ । अध्ययनमा के पनि खुलासा भएको छ भने, जवान पुरुष २२ बर्षकी युवतीसँग सम्बन्ध बढाउन चाहन्छन् भने ५०-६० बर्षका पुरुष पनि तिनै २२ बर्षे युवतीप्रति सम्बन्ध बनाएको कल्पना गर्छन् ।
यो थियो रिसर्च
यो रिसर्च साइएआर-एक्सआइवी नामको जर्नलमा प्रकाशित भएको छ, जसमा फिनल्यान्डको तुर्कुस्थित अबो एकाडेमी युनिभर्सिटीका मनोविज्ञहरुले उक्त कुरा खोतलेका हुन् । उनीहरुका अनुसार यस सन्दर्भमा महिलाको सोंच भने निकै संकिर्ण पाइयो । महिलाहरु केवल यस्ता पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्, जो उनीहरुकै उमेरको हाराहारीको होस् वा त्यो भन्दा बढी । उनीहरु आफुभन्दा कम उमेरका पुरुषसँग सम्बन्ध बनाउनेबारे खासै सोच्दैनन् ।
समझदार पुरुष मनपर्ने
महिलाहरुलाई समझदार पुरुषसँग सम्बन्ध बनाउन रुची हुने उक्त अध्ययनमा देखियो । अध्ययन अनुसार अक्सर महिला आफुभन्दा कम उमेरका पुरुषसँग सहज महसुष गर्दैनन् । उनीहरु आफुभन्दा ठूलो उमेरकै पुरुषसँग बढी आनन्द महसुष गर्छन् ।
२ हजार ६ सय ५५ वयस्कमाथि रिसर्च
यो रिसर्च २ हजार ६ सय ५५ वयस्कमाथि भएको थियो । साथै रिसर्चको नतिजाले यो पनि बतायो कि, पुरुषहरु आफुभन्दा कम उमेरकै युवतीसँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहे पनि उनिहरुले सन्तुष्ट भने तुल्याउन सक्दैनन् ।
यौनमा उमेर बाधक हुन्छ ?
यो अध्ययनको निष्कर्ष थाहा पाइसकेपछि एउटा प्रश्न उब्जन्छ, के यौनमा उमेरको कुनै प्रभाव रहन्छ ? नेपालीमा भन्ने गरिएको छ, तन बुढो भएपनि, मन बुढो हुँदैन ।
बुढ्यौली उमेरले गाँज्दै लगेपनि यौनइच्छामा कमी भने हुँदैन । भलै उनको यौनसक्रियता सिथिल हुनसक्छ । यौनमा त्यसरी सक्रिय नहुन सक्छ, जसरी जवानमा भइन्छ । यद्यपी यौनइच्छा भने उस्तै रहन्छ । यो स्वभाविक र प्राकृतिक प्रक्रिया पनि हो ।
युवतीहरु अक्सर आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् । उनीहरु परिपक्क पुरुष चाहन्छन् । आफ्नो आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले पनि उनीहरु परिपक्क पुरुषसँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् । समझदार, परिपक्क, स्मार्ट, बौद्धिक, रोमान्टिक पुरुषसँग युवतीहरु आकषिर्त हुने पाइएको छ ।
भोलिदेखि देशैभर ‘जय भोले’ प्रदर्शन हुँदै, हेर्ने होइन...
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री करिश्मा कपुर नेपाल आउँदै
अहिलेसम्म पनि शाहरुखलाई उपहार नदिएको गौरीले गरिन यस्तो...
जसितासँग प्रदीपको मोबाइल नम्बर पनि छैन, फेसबुकबाट आउट,...
दी भ्वाइस अफ नेपालका यी हुन् चार फाइनलिस्ट...
विपिन र नम्रताको बिचमा निश्चलको चलखेल
चलचित्र झमक बहादुरको नयाँ ट्रेलर सार्वजनिक
औंठीको नयाँ फेसन !छालालाई छेडेर औंठी लगाउन थालियो...
प्रियंकालाई ‘फ्यान’को चेतावनीयुक्त चिठी, ज्ञानेश्वरको घर छोड्दै नायिका...